Lalao Android 2 mampiankin-doha tsy azonao adino | Androidsis
Androany dia te hampahafantatra anao aho Lalao addicting 2 ho an'ny Android fa tsy ho vitanao ny tsy mahita ny Android-nao raha iray amin'ireo mpampiasa tia lalao mahazatra na lalao tsotra be amin'ny resaka rafitra na lohahevitra lalao ka lasa manandevo indrindra, indrindra noho ny fahatsorany lalina.
Alohan'ny hanohizanao mamaky ity lahatsoratra ity izay hanoroako hevitra anao 2 amin'ireo lalao manintona indrindra ho an'ny Android, Tsy maintsy milaza aminao aho ary mampitandrina anao fa ireto dia lalao roa izay, na eo aza ny fahatsorany ao amin'ny rafitry ny lalao, dia samy mety ho mahasosotra indrindra izy ireo satria sarotra be ny mandroso ary hihoatra ny marikao manokana. Mampitandrina ianao noho izany.
1 Lalao Android 2 mampiankin-doha tsy azonao adino
1.1 1 - Skyward
2 Faha-2 - Jelly Jump
1 - Skyward
Ny lalao mampiankin-doha voalohany ho an'ny Android izay atoroko amin'ity lahatsoratra ity dia lalao iray avy amin'ireo mpamorona ny Ketchup, orinasa iray manokana amin'ny famolavolana lalao Android izay tena manao azy tsara tokoa.
En any an-danitra, lalao azontsika sintonina maimaim-poana amin'ny Android amin'ny Play Store an'ny Google amin'ny alàlan'ny rohy mivantana izay avelako etsy ambany kely. Lalao maimaim-poana na dia miaraka amin'ny safidy fividianana rindrambaiko tafiditra ao anaty rindrambaiko, izay tsy maintsy raisintsika ary arovana ny tenimiafin'ny kaonty Google anay amin'ny fividianana, indrindra alohan'ny hamelana ny zanatsika hilalao amin'ny terminal Android.
Ny sary sy ny famolavolana ny lalao izay amin'ny fitsipika dia mampahatsiahy antsika betsaka ny momba ny malaza tsangambato ValleyTsotra be izy ireo ary natao manokana mba hahatonga ny lalao maivana araka izay tratra ary mety amin'ny fametrahana ireo ankamaroan'ny terminal Android. Raha ny rafitry ny lalao dia ity no kilasika paompy hilalao izay tsy maintsy hifehezana ny boribory aseho eo amin'ny efijery mba handrosoantsika amin'ny lalana na ny sehatra miova amin'ny alàlan'ny fanarahana ny tanjontsika sy ny fijanonantsika eo amin'ny toerana mahitsy sy ilaina ny faribolana faharoa izay aseho amin'ny fihetsehana.
Faha-2 - Jelly Jump
Ity lalao fiankinan-doha faharoa ho an'ny Android izay tiako aseho anao anio ity, dia avy amin'ireo mpamorona mitovy amin'ilay teo aloha, izany hoe, avy amin'ny naman'i Ketchup, azontsika atao ny misintona azy amin'ny fomba mitovy, maimaim-poana amin'ny Play Store an'ny Google ihany ary, toy ilay teo aloha, miaraka amin'ny safidin'ny fividianana rindrambaiko tafiditra.
Ny lalao dia mamaly ny anaran'ny Jelly junp ary misy sary sy mozika mahomby indrindra manitrika antsika amin'ny tantaran'ny lalao izay momba azy irery Kitiho ny rafitry ny lalao plaary, miezaha handroso, amin'ity indray mitoraka ity, miaraka amina karazana masom-bolo fa ho very eo an-dàlana isika miankina amin'ny fahaizantsika manokana hisoroka ireo lampihazo ho avy ary izay mitovy amin'ireo ihany no hananantsika miakatra amin'ny fotoana mety handrosoana amin'ny làlantsika mankany an-tampon'ny tampon'isa.
Raha fintinina, lalao roa mahadomelina tsara ho an'ny Android, tsy mety amin'ny olona sosotra haingana loatra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Lalao Android 2 mampiankin-doha tsy azonao adino